သူတို့ ဆီက မဲဆွယ်ပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူတို့ ဆီက မဲဆွယ်ပုံ
သူတို့ ဆီက မဲဆွယ်ပုံ
Posted by candle . on Jul 19, 2013 in Creative Writing | 15 comments
မနေ့ က ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ဖနွမ်းပင် မြို့ ထဲကိုသွားရတယ် ။
Candle နေတဲ့နေရာကနေ နာရီဝက်လောက် ကားမောင်းရပါတယ် ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မဲဆွယ်တဲ့ အဖွဲ့ တွေနဲ့ တိုးနေတော့ Candle စပ်စုမိပြန်တာပေါ့ ။(မိုးတွေရွာပြီး မိုးချုပ်သွားတဲ့အထိ) ။
28 JULY မှာ CAMBODIA နိုင်ငံမှာ ရွှေးကောက်ပွဲရှိပါတယ် ။
အဲ့ဒီအတွက် ပါတီတစ်ခုရဲ့ မဲဆွယ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ဘာရယ်မဟုတ်
ရွာထဲက အမျိုးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ် ။
အင်အားကြီးပါတီ သုံးခု ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာပါ ။
လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ သမ္မတ ဟူဆန် အဖွဲ့ ရယ်
ပြည်သူအများကကြိုက်ကြတဲ့ ဆမ်ပရာစီ ခေါင်းဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ ရယ်
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဘဝတစ်ပါးပြောင်းရှာတဲ့ ဘုရင်ကြီး စိန့် ဟာနု ရဲ့ သားတော်အကြီး အဖွဲ့ ရယ်
( လက်ရှိမှာ သားတော်အငယ် စိန့် ဟန်မိုနီ ကဘုရင်ရာထူးပါ ) ။
အခုဓာတ်ပုံတွေကတော့ ဆမ်ပရာစီ အဖွဲ့ ရဲ့ မဲဆွယ်ပုံတွေပါ ။
ဓာတ်ပုံဘေးမှာ စာရေးလို့ အဆင်မပြေတော့လို့ ပန်းကုံးနဲ့ မျက်မှန်နဲ့ ကတော့ ပြည်သူ့ အချစ်တော် ဆမ်ပရာစီပါ ။အဲ့ဒီပုံ နှစ်ပုံကတော့ 18 JULY မှာ သူ့ ကို အမေရိက ကအပြန်မှာ သွားကြိုလာကြတဲ့ပုံပါ ။(နှစ်နှစ်နီးပါး တိမ်းရှောင်နေရာမှ အပြန်ခရီး) ။
မဲလိုက်ဆွယ်တဲ့အထဲမှာတော့ သူကိုယ်တိုင်မပါ ပါဘူး ။
Candle ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဖတ်ရဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ဂဇက်စီဂျေပီသစွာ တကူးတက သတင်းယူပြီး တင်ပေးတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံနဲ့ စာ တတွဲထဲ တင်ချင်ရင် ဓာတ်ပုံတင်တဲ့အခါ caption မှာ စာရေးရပါတယ်။
candle အတွေ့ အကြုံလေးတွေဖတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ် မမ
တစ်ပုံတင်ပြီးတိုင်း စာတစ်ခါရေးရတာလား ဟင်
candle ကပုံအားလုံးတင်ပြီးမှစာရေးပြီး အင်းဆက်တူပို့ စ် လုပ်တော့တစ်ပုံဘဲရတာထင်တယ် ။
ပုံတင်ရင် စာကို သူ့သက်ဆိုင်ရာပုံတင်စဉ် သူ့ရဲ့ caption မှာ ရေးရပါတယ်။
ပြည်တွင်းစစ်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာဆင်နွှဲပြီး ဆင်းရဲတွင်းထဲကျခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက မြန်မာပြည်ထက်စာရင် တိုးတက်တာ စနစ်ကျပြီး မြန်ဆန်သလိုပဲ။
အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်ကိုတောင် အိပ်စပို့ လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ တွေ့တွေ့နေရတယ်။
တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် အမှီကောင်းရှိဖို့လည်း လိုတယ်။
(မှီခိုနေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူး။)
Bravo!!!! CJ candle
ဒို့တွေက ဘုရင် သီဟာနု လို့ ခေါ်တာကို စိန့်ဟာနု လို့ အသံ ထွက်တယ်လား။
သမ္မတ ကိုလည်း ဟွန်ဆန် လို့ ရေးကြတယ်။
သားအငယ်က ဘုရင် ဖြစ်ပြီး သားအကြီးက မဖြစ်ဘူးနော်။
သူတို့ဆီက နိုင်ငံရေးလည်း သိချင်ပါတယ်။
Sri Lanka ကို သီရိလင်္ကာ ဖတ်သ လို ၊
Sihanouk ကို သီဟာနု လို ဖတ် တာ ဖြစ် နိုင် တယ် ၊
ကျ နော် တို့ တရုတ် တွေ က တော့ စီဟာနု လို့ ဖတ် ပါ တယ် ၊
လက် ရှိ ဘုရင် က သီဟာနု ရဲ့ သား အကြီး နဲ့ တူ ပါ တယ် ၊ Wiki မှာ တော့ အဲ လို ရေး ထား တယ် ထင် တာ ဘဲ ၊
“ Norodom Sihamoni (Khmer: នរោត្តម សីហមុនី; born 14 May 1953) is the King of Cambodia since 29 October 2004. He is the eldest son of Norodom Sihanouk and his second wife Norodom Monineath Sihanouk. ”
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရဲ့ “ ပဲပြုတ် နဲ့ နံပြား စားချင် တယ် ” ကို ဗမာ ပြည် သူ တရပ် လုံး က ကြိုက် သလို ၊
သီဟာနု လည်း ဘုရင် ဖြစ် လျက် နဲ့ စက်ဘီး စီး ပြီး ရုံး တက် တာ ကို ၊ သူ့ ပြည် သူ တွေ က သူ့ ကို မချစ်ခင် ၊ မ ရို သေ ဘဲ ဘယ် နေ နိုင် ပါ့ မ လဲ ။
အ ရင် ခေတ် က ခေါင်း ဆောင် နဲ့ အ ခု ခေတ် ခေါင်း ဆောင် များ အ ရမ်း ကွာခြား နေ ပါ ကလား !!!
Don Juan Ronald ပြောတာ မှန်ပါတယ် Norodom Sihamoni က second wife ကမွေးတဲ့ သားနှစ်ယောက်ထဲမှာတော့ သားအကြီးပါ ။ သားအငယ်က လက်ရှိ ဘုန်းကြီးဝတ်နေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာနေခဲ့ပါပြီ ။ နောင်များမှ ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ တင်ပေးပါဦးမယ် ။
အထက်မှာ candle ပြောခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင် Norodom Ranorith က first wife ကမွေးတဲ့တစ်ဦးတည်းသော သားပါ ။
Norodom Ranorith နဲ့ ယှဉ်လျှင်တော့ လက်ရှိ ဘုရင်ရာထူးယူထားတဲ့ Sihamoni ကသားအငယ်ဖြစ်နေပါတယ် ။
သူတို့ နှစ်ယောက်က အမေ မတူကြပါဘူး ။
အော်..သိထားသလောက်တော့ ဘုရင်ကြီး Sihanuk က တရားဝင်ယူထားတဲ့ဇနီး က ခုနှစ်ယောက်ပါတဲ့ ။
ထိုဇနီး ခုနှစ်ယောက်ထဲမှ ကျော်ကြားပြီး ပြည်သူ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ သားသမီးက လေးယောက်ပါ ။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင်ကြီး Norodom Ranorith (တစ်ယောက်သောဇနီးမှ)။
လက်ရှိဘုရင်ရာထူးယူထားတဲ့ Norodom Sihamoni နဲ့ရာသက်ပန်ဘုန်းကြီးဝတ်နေတဲ့ Chakro Pong က(တစ်ယောက်သောဇနီးမှ) ။
သမီးတော် Bopha tevi ဘို့ ဖန်းဒေဝီ က( တစ်ယောက်သောဇနီးမှ ) ဖြစ်ပါတယ် ။
ဝင်ရောက်အားပေးဆွေးနွေးကြတဲ့ အံတီပဒုမ္မာ နဲ့ Don Juan Ronald,့ မမ , အလင်းဆက် , ဦးကြောင်ကြီးတို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ။
ဖေတူတဲ့သားထဲတွင်တော့ သူက သားအငယ်ပါ ။
သူတို့ ဆီက အရေး ကလည်းအရှုပ်သားကလား အံတီရယ်
တကယ်တော့ ဒီမိုနိုင်ငံ ပါဘဲ..သို့ သော်…………
ဗဟုသုတ ရပါအိ ။
ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ မြန်မာသည် အာဆီယံမှာ အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းဝင် ဖြစ်ပါတယ် … သို့ပေသိ ဓာတ်ပုံထဲမှာ အဲဒီကလူတွေ ဝတ်ဆင်ထားတာ လမ်းပန်းအနေအထား သန့်ရှင်းသပ်ရပ် တောက်ပြောင်နေတာ မြန်မာပြည်ထက် အပုံဂျီးသာတယ်… မျှော်လေးဒိုင်းမှိုင်းရီ အိုဗယ့်မြန်မာပြည်….
ထေရာတွေရဲ့.. ၀ါဒခံအုပ်ချုပ်ကြတာခြင်းအတူတူ.. အမြင်မှာတင်… ဘာကွာသလည်း… သတိထားမိလား…
ပုံတွေထဲ.. လူတန်းစားတခု… လုံးဝ…မပါရေးချမပါ..
အဲဒီနိုင်ငံ.. ရှေ့လျှောက်.. တိုးတက်သွားဖို့က.. မြန်မာပြည်ထက်ပိုနီးစပ်ပါကြောင်း..
Theravāda has been the predominant religion of Sri Lanka (now about 70% of the population) and most of continental Southeast Asia (Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand).
ပါမလား သဂျီးရဲ့ သံဃာတွေက နေ့လည် ဆွမ်းချိန်အမှီ ကားနဲ့ ရှေ့မှာ ကြွသွားဂျပြီ… နေသာသလို နေပါ သဂျီးရယ်… ကိုယ့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းစစ် အရေးသာပူ….
အဲဒါ သူတို့ရဲ့ စနစ်အခြေအနေကို
စနစ်နဲ့ လူ(စိတ်ဓါတ်) သဟဇာတ
မသိတာလေးတွေ ဖတ်သွားမှတ်သွားပါတယ်… ဖယောင်းတိုင်လေးရေ..
ကြုံဖြစ်ရင်တော့ အိမ်နီးခြင်း ဗီယက်နမ်အကြောင်းလေးတွေလဲ တင်ပေးပါဦး…
တိုင်းရေးပြည်ရေး မဆွေးနွေးချင်တော့ဘာဘူးလေ… ကျော်က အိမ်ထောင်ပြုတော့မှာ ကလား ..
ဥပုသ်နေ့ကြီးမှာ ဟာလေးလူးလျာ လုပ်မည့်သူတွေကို ကျောက်စ်ညစ်တယ် ဒယ်ဒီပါပါးချစ်ဖေဖေ…